काठमाडौं । के तपाईले खाना नमिठो भएका कारण जन्ती खाली फर्केको खबर सुन्नु वा देख्नु भएको छ ? सायद देख्नु वा सुन्नु भएको छैन । तर यस्तै एक घटना अहिले बाहिर आएको छ । विवाहमा केटापक्ष र केटीपक्षको विवाद एउटा ठूलो मुद्दा हुन्छ, जसको कारण धेरै पटक विवाह रद्द पनि हुने गरेको छ । तर यति सानो कुरामा विवाह रद्ध भयो की सबै चकित बनेका छन् ।
त्यस्तै एउटा घटना अलीगढबाट बाहिर आएको छ । त्यहाँ दुलहाको जेठो दाईले विवाह समारोहमा खाने कुराको स्वाद नभएको बताएपछि बबाल भएको हो । त्यसपछि उनी र दुलहीका दाजु बीच विवाद भएको थियो । तनाव यतिसम्म बढ्यो कि घटना प्रहरी चौकीमा पुग्यो । प्रहरीले दुबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास गर्यो तर उनीहरू सहमत भएनन् ।
जन्तीहरु दुलही बिना नै फर्किएर आएका हुन् । अब यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भइरहेको छ । यो घटनालाई लिएर सबै चकित परेका छन् । हिन्दुस्तान टाइम्सको रिपोर्टका अनुसार बुलन्दशहरको खुर्जाबाट जावानीको सिकन्दरपुर कोटामा बुधवार रात जन्तीको जुलुस आएको थियो । सबै ठीकठाक चलिरहेको थियो ।
आफन्तहरू डीजेमा नाचिरहेका थिए । विवाह समारोह लगभग पूरा भएको थियो । तर जब दुलहाको भतिजले खाना खान शुरू गरे, उनले खानामा स्वाद नभएको आरोप लगाउन थालेका थिए । उनले त्यहाँ भएका माइती पक्षका व्यक्तिहरूको अगाडि आफ्नो रिस देखाएका हुन् । दुलहीको भाइले उनीहरूलाई फकाउन खोजेका थिए ।
तर कुरा मिलेन र हात हालाहालको अवस्थामो पुग्यो । त्यसपछि दुलहीको पक्षले प्रहरीलाई बोलायो । प्रहरी घटनास्थलमा पुगे र दुबै पक्षलाई मिलाउन प्रयास गर्यो तर उनीहरु तयार भएनन् । घटनापछि दुलही पक्षले विवाह गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । दुलही लिन गएका जन्तीहरु दुलही बिना नै फर्किएका हुन् ।
भारतका प्रहरीको आत्मरक्षा कवज देख्दा दुनियाँ चकित बन्यो
फेसबु लभले बच्चा जन्मिएपछि छिमेकीले समातेर २ युवतीसँग श्रीमान बनेर विताउने दिन भाग लगाइदिए
कति माया गर्छौ प्रिय ? प्रश्नमा मुटु खोलेर हेर तिम्रै नाम छ दिएपछि चक्कुले खोल्न खोज्दा जे भयो !
घुस लिदैं गर्दा सरकारी कर्मचारीलाई गोप्य टोलीले रोमाञ्चक तरिकाले रंगेहात पक्रियो
फेसबुकको चिनजानले ‘लिभ इन रिलेशन’मा बसेपछि खुलेको सत्यले युवतीलाई बर्बाद बनायो
माओवादीका नेताले पत्नी नै अदल–बदल गर्ने गरेको खुलासा